umshini wokuvuna ukolweni ozithengisa uzithengiswa yi-gasonline nodizili
umshini wokuvuna ukolweni omncane ohlanganiswe nomshini wokuvuna ukolweni luhlobo lomvuni kakolweni ohlanganiswa ngokusebenza okuningi, evumelana kakhulu nokuvunwa okuncane kwelayisi nokuvuna ukolweni. Kuhlanganisa ukuvuna, ukubhula, ukukhumula, Ukweqa nokupakisha inqubo eyodwa. Kuyabakhulula abalimi emsebenzini wokuvuna okusanhlamvu okusanhlamvu. Futhi yamukelwa kahle ngabathengi kanye nabathengisi bobabili ngaphakathi nangaphandle ngenxa yokuvumelana nezimo okukhulu,umvuni kakolweni ozivumelayo unesakhiwo esihle, ukusebenza okuthembekile, ukusebenza nezimo kanye nokugcinwa okulula.
Umshini wokuvuna ukolweni ozisebenzelayo usuqhubeke iminyaka emine ucwaninga nokwenza ngcono, futhi amakhulu wokuhlolwa kwensimu anqobele ubunzima bezinhlobo zamamodeli edlule abe nzima, ayikwazi ukuvuna ukubamba, ukufaka izilimo, nokuvuna. Kuxazululwe ubunzima babalimi ababheke loess izinkulungwane zeminyaka, umjuluko nodaka, futhi kungumshini omuhle wokuthi abalimi bathole imali futhi bacebe.
Gasoline Ukolweni Mvuni kufanelekile neziqinti, izintaba, amagquma futhi adinga ukuvuna ubusi, stevia, i-sage, ryegrass, oats, ikusasa, ukuvuna: ukhumini, prunella, ukolweni, Irayisi le-soya, udlwenguliwe, ifilakisi, utshani bommbila, nezinye izilimo.
Izinhlamvu ze-Small Combined Wheat Harvester
* Iyasebenza endaweni enezintaba, umhlaba onamagquma, insimu ye-paddy, insimu eyonakalisiwe nodaka lodaka, lapho ukuvuna okujwayelekile kungangeni khona.
* Isisindo esikhanyayo siqinisekisa ukuhamba kahle okuguquguqukayo.
* Ngokuzenzakalelayo, isivuno esizisebenzelayo esiqhutshwa yinjini yedizili, ilungele ukuvunwa okuncane kwelayisi nokuvuna ukolweni.
* Isondo elikhethekile lenkambu ye-paddy, ukujula kodaka kungafinyelela ku-30cm.
* Ukuphakama kokuthwebula kungashintshwa ngokwezifiso.